Wzọ atọ iji gbaa mbọ hụ na itinye aka na obere ihuenyo gị nwere nnukwu mmetụta | Martech Zone
Obi abụọ adịghị ya na ọrịa ahụ gbanwere omume ịzụ ahịa ndị ahịa na atụmanya na-eduga ndị na-ere ahịa ịchọta ụzọ ọhụrụ kachasị mma iji tinye aka na ịntanetị. N'elu ọnụ ọgụgụ na-akwụ ụgwọ n'ịntanetị na 2020 - elu 44% si na 2019 ihe karịrị $ 861 ijeri na US - enwere nnukwu mmụba na nhọrọ ntanetị n'ịntanetị, yana 80% nke ndị ahịa na-atụ anya ịbawanye ojiji nke Buy-Online-Pickup-In-Store (BOPIS) na ntụgharị ụzọ na 90% ugbu a na-ahọrọ nnyefe ụlọ karịa nleta ụlọ ahịa.
Ndị ahịa na-adịkarị nkọ karịa mgbe ọ bụla mgbe a bịara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị na ịzụ ahịa ọhụụ ọhụrụ a na ụbawanye nke taa na ntanetị nke mbụ na ntanetị ga-enwe mmetụta ogologo oge. Ọ bụ ya mere ndị ahịa ga-eji hụ na akara aka ọ bụla bụ nke izizi, ọsọ ọsọ, na enweghị ntụpọ, n'agbanyeghị ebe ndị na-ege ha ntị na ndị ahịa na-etinye aka. Gụnyere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke ndị ọrụ ama ama na-azụ ahịa ugbu a na ngwaọrụ mkpanaka ha, enwere ohere buru ibu iji nweta ngwaọrụ ntanetị ndị ahịa.
Ike nke obere ngebichi na-eweta ụfọdụ uru ndị pere mpe gụnyere itinyekwu aka, mgbanwe, na iguzosi ike n'ihe ogologo oge. Branddị kwesịrị ị paya ntị na ọnọdụ atọ dị iche iche - micro-video, microbrowsers na njikarịcha mkpanaka - iji hụ na ha na-eru ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị.
Soro na Micro-Video
N’oge TikTok na Instagram Reels, ndị ahịa maara obere ihe eji egwu egwu ma ọ bụ ozi dị na mkpanaka ha. Dị kwesịrị ịmalite usoro a site na ịmepụta obere vidiyo vidiyo na-adọrọ uche ndị na-ekiri ngwa ngwa ma mee ka ha nwee ọ andụ ma sonye. Naanị ole na ole n'ime ọdịnaya, ụdị nwere ike izipu ozi na-adọrọ adọrọ nke na-abawanye echiche na ntụgharị.
Micro-video ọdịnaya bụkarị naanị 10-20 sekọnd ogologo, nke pụtara ụdị nwere obere oge iji hụ na a na-ewepụta obere vidiyo ọ bụla na enweghị ike ha. Iji mezuo nke a, ụdị kwesịrị ibu ụzọ jide n'aka na ọdịnaya ahụ na-agbazi iji mejupụta ihuenyo nke ngwaọrụ ọ bụla, ma ọ bụ kọmputa desktọọpụ, mbadamba ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka. A ga-edozi ọdịnaya niile maka eserese ma ọ bụ ihu ala iji zere ịdị ogologo oge nke nwere ike imebi nhazi peeji, mebie ihe oyiyi ma ọ bụ gosipụta ogwe ojii na vidiyo ahụ. Ndị na-ere ahịa na ndị mmepe nwere ike iji AI na ikike mmụta igwe rụọ ọrụ nke ọma iji mepụta ọtụtụ ụdị dị iche iche nke vidiyo ọ bụla achọrọ maka nha ihuenyo ọ bụla, nghazi na ngwaọrụ.
Tụkwasị na nke a, ndị na-ere ahịa na ndị mmepe kwesịrị ị paya ntị nke ọma na ederede metụtara vidiyo ọ bụla, gụnyere isi okwu na ndepụta okwu. Ndị a bụ akụkụ dị mkpa nke ọdịnaya nke na-enye ọnọdụ maka onye na-ekiri ya, ọkachasị kemgbe 85% nke ọdịnaya vidiyo a na-ele anya na Facebook na-enweghị ụda. Na mgbakwunye, inye ndepụta okwu ziri ezi dị mkpa iji rube isi na ịnweta ADA. Ojiji nke AI nwekwara ike iwepụta ederede na akpaghị aka na vidiyo ọ bụla.
Jide Ike nke Microbrowsers
Microbrowsers bụ obere nlele nke saịtị nke na-abawanye n'ime mkparịta ụka na ngwa ngwa ozi nzuzo dị ka Slack, WhatsApp na Facebook Messenger. Ọmụmaatụ, chee echiche banyere mgbe ị zigara mama gị ihe iMessage njikọ akpụkpọ ụkwụ na gị ụbọchị ọmụmụ chọrọ ndepụta. Ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa na-ewepụta ihe osise thumbnail dị mkpa ma ọ bụ nlele vidiyo na-akpaghị aka. Nke a na-enyere ya aka ịhụ ihe njikọ ahụ bụ ma na-ewuli echiche dị mma nke ika ahụ, na-eme ka o kwe omume na ọ ga-pịa ma zụta akpụkpọ ụkwụ ndị ahụ dị ka onyinye.
Njikọ microbrowser ndị a na-enye ohere nnabata buru ibu nke ụdị ndị dị mwute na-elegharakarị anya. Dị kwesịrị ijide n'aka na ihe ngosi ma ọ bụ vidiyo ndị a na-egosipụta n'ụzọ kachasị mma n'ofe nkata na ngwa ngwa ozi, yana ọdụ dị ogologo nke ngebichi ndị ọzọ dịka ngwaọrụ egwuregwu na ngwaọrụ ndị mara mma.
Ndị mmepe kwesịrị ijide n'aka na njikọ na-ekpughere n'ime microbrowsers site na:
Notkọwa ihe niile na akara HTML, na ịdenye aha na okwu 10 yana nkọwa mkpụrụedemede 240
Na-eji Open Graph eme ihe mgbe niile dị ka akara ngosi maka akaụntụ maka microbrowsers dị iche iche
Ahọrọ otu unfurl oyiyi na anya na-adọrọ adọrọ na-akpali nnata pịa maka ozi ndị ọzọ
Iji obere vidiyo "nanostories" maka obere microbrowsers na-egosipụta vidiyo ugbu a
Site na ịgbaso ndụmọdụ ndị a, ụdị nwere ike ime ihe kachasị nke ọdịnaya microbrowser ha ma mee ka ndụmọdụ ndị ọgbọ na-ebute na clicks na ahịa. Tụkwasị na nke a, ha nwere ike iji data ahụ mee ka ị mata nghọta na usoro na mmasị ndị na-ege ntị, yana ego ole ahịa sitere na ndị na-ezo aka na ndị ọgbọ, ma ọ bụ "mmekọrịta mmadụ na ibe ya." Trafficzọ okporo ụzọ microbrowser a na-apụtaghị ìhè bụ ohere ọla edo maka ndị na - ere ahịa - karịa data ha nwere na onye na - ekekọrịta njikọ site na kerịta nzuzo na mkparịta ụka otu, ka ha nwere ike ịbawanye ọdịnaya na ike nke Ntuziaka.
Mee saiti a ka odi enyi
Ka ndị ahịa na-atụkwasị obi n'ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ dịwanye mkpa maka ụdị iji nye ọdịnaya ọdịnaya weebụ nwere ọgaranya nke na-ebuwanye ibu na ngwaọrụ mkpanaka. Ndị ahịa na-achọ ahụmịhe na-arụ ọrụ nke ọma na-eme ngwa ngwa ma na-anabata. Ha agaghị echere maka otu peeji nke ibu. N'ezie, igbu oge nke abụọ na nzaghachi peeji nwere ike ịkpata a Pasent 16 na-ebelata na afọ ojuju ndị ahịa.
Dị ga-elekwasị anya na ogo, usoro na ogo nke akụ dijitalụ ha iji nyefee atụmanya ndị a. Maka onyogho, ndị mmepe kwesiri ịhazigharị onyonyo maka akụkụ ihe eji arụ ọrụ nke ọma, na-emezigharị maka ogo ọdịnaya, mkpebi na nhazi iji dabaa gburugburu ngwa ahụ. Otu ụkpụrụ a metụtara vidiyo, ma na-echekwa ogo vidiyo iji nabata ọnọdụ netwọkụ onye ọrụ. Site n'ime ka websaịtị na-enwe mmekọrịta enyi na enyi, ụdị nwere ike inwe ntụkwasị obi na ndị ọrụ ga-enwe ọ shoppingụ ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị na-enweghị mgbagha nke na-eme ka okporo ụzọ na ahịa dị.
Nnukwu Ihe Na-esite na Nkọwa Ndị Nta
Ọ dịwanye mkpa maka ụdị iji lelee atụmatụ ntakịrị ihuenyo ha ma hụ na ha na-enye ndị ọrụ ekwentị aka. Mepụta micro-video, microbrowser na omume kachasị mma kachasị mma ga-abụ isi ihe iji mezuo atụmanya nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị taa ma merie nnukwu nsonaazụ na ụwa mkpanaka.
Tags: ai vidiyoonye ozi facebookAkụkọ Instagrammicro-nchọgharịobere vidiyomicro-obere vidiyomicrobrowsersaka ekwentinjikarịcha ekwentịpeeji nke mkpanakamobile anabatamobile ọsọvideo mkpanakaenyi na enyiihu peejianabataobere videoslackobere ihuenyoTikTokusoro vidiyonhazi vidiyonha vidiyowhatsapp
Site na afọ iri abụọ nke ahụmịhe ahịa, Juli na-akwado usoro mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ nke Cloudinary yana mmemme ahịa ndị ahịa. Tupu ya abanye na Cloudinary, Juli gbara ọsọ na ịzụ ahịa azụmaahịa nke onwe ya ebe ọ mepụtara ma mepụta mmemme azụmaahịa na-aga nke ọma maka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụike na enweghị ọrụ, na-achịkwa ihe niile site na ịkọ aha na PR na ahịa na ihe omume.